Ra'iisulwasaaraha Hindiya oo gabar kasoo badbaadiyay Soomaaliya | Dhamays Media Group
Ra’iisulwasaaraha Hindiya oo gabar kasoo badbaadiyay Soomaaliya
Ra’iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi ayaa ka qayb qaatay badbaadinta haweenay u dhalatay Hindiya oo Soomaaliya lagu soo warramay in ay jir dil ugu gaysteen reerka uu ka soo jeedo nin dalka Hindiya kasoo guursaday, sida uu shaaciyay wargeyska INDIA TODAY. Haweenaydan oo lagu magacaabo Afreen Begum, oo 31 sano jir ah ayaa 28-kii bishii Maarso laga soo badbaadiyey guri ay ku xidhnayd tan iyo sannadkii 2018-kii oo ku yaala Muqdisho. Caasimadda dalka Hindiya ayaa iyada iyo sadexdeeda gabdhood waxa ay ka dagi doonan 2da bisha April. Hindiya kuma laha wax safaarad ah gudaha Soomaaliya, saraakiil ka socota safaaradda ku taala dalka Kenya ayaa howshan ka caawiyey booliska dalka Soomaaliya. Hase yeeshe arrinkan waxa soo dhexgalay Ra’iisul wasaare Modi, wuxuuna la hadlay maamulka dalka Soomaaliya, isagoo dalbaday in Afreen Begum ay si nabad ah ku timaado gurigeeda magaalada Hyderabad. Waalidiinta dhalay gabadhani waxay ku noolyihiin deegaanka Basharath Nagar oo ka tirsan Hyderabad. Qisadan ayaa bilaabantay sannadkii 2013-kii ka dib markii ay guursatay nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Maxamed Xusseen Ducaale. Muddo 8 bilood ah Afreen may awoodin inay la xidhiidho qoyskeeda. Bishii Febarwary ayaa Afreen aabaheed Syed Gafoor Ali uu booqday xarunta wasaaradda arrimaha dibadda oo isla markiiba wargelisay safaaradda Hindiya ee ku taala dalka Kenya. Dadaal badan ka dib waxaa u suura gashay inay helaan halkii ay ku suganayd gabadhu. waxayna yidhaahdeen kooxdii baadhitanka waday “Waxa uu ahaa kiis aanan ka heynin wax xog ah. Xaaladda ammaanka ee Soomaaliya ma aha mid wanaagsan marka taas ayaa sii adkaysay baadhitaanka”, Ka dib markii la soo badbaadiyey waxaa suura geli weyday inay Afreen ka baxdo gudaha Soomaaliya maxaa yeelay waaxda socdaalka ee dowladda ayaa diidday inay wadato saddexdeeda gabdhood. “Waxaan sugaynaa inay Afreen si nabad ah uga soo dagto Hindiya. Markaas unbaanu dhoola cadayn karnaa. Waxaanu u mahadcelinaynaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo ra’iisul wasaaraha.” Ayuu yidhi Syed Raheem Ali said oo ah Afreen walaalkeed.
Previous: War Deg Deg Ah: Madaxweyne Biixi Oo Magacaabis, Xilka Qaadis iyo Isku Badel-kii ugu Balaadhnaa Ku Sameeyay Golaha Xukuumadiisa
Next: Boqorka Brunei ayaa soo saaray wareegto uu dalkiisa ugu soo rogay Shareecada Islaamka,